सकियो ओली-प्रचण्डको हाईकमाण्ड बैठक, भए यस्ता नेताकार्यकर्ता चकित पर्ने निर्णय — Sanchar Kendra
११४ व्यक्तिले यौ’न शो’षण गरेको अभिनेत्री रेवतीको खुलासा
२यस्तो अवस्थामा भेटिए मङ्गलबारदेखि बेपत्ता भएका ७ जना
३कोरोना संक्रमणमुक्त भएकालाई ‘पोस्ट कोभिड’को खतरा, यस्ता छन् लक्षणहरु
४दीपक मनाङेको अभिव्यक्तिबारे एमालेले माग्यो सरकारको धारणा, मनाङेले के भनेका थिए त्यस्तो ?
५मुख्यमन्त्री पोखरेलले मागे विश्वासको मत
६फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको मूल्य
७कलेजो रोग र कोरोनाबारे जान्‍नु पर्ने केही कुरा, जसले बचाउन सक्छ तपाईको ज्यान
८उपचारका लागि भारत पुगेका झलनाथ खनालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे आयो यस्तो जानकारी
९समूह विजेताका रूपमा नेदरल्यान्ड्स युरो-२०२० को अन्तिम १६ मा
१०गंगामा तैरिरहेको बासकभित्र भेटिइन् २१ दिनकी बच्ची, संगै थियो यस्तो भावुक पत्र
११‘नेपालमा भारतको नाकाबन्दी कुरुप छिमेक कूटनीतिको प्रतीक’
१२मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज विश्वासको मत लिँदै
३नेपाललाई आगामी साता स्वास्थ्य सामग्री पठाउँछौं- डब्ल्यूएचओ
सकियो ओली-प्रचण्डको हाईकमाण्ड बैठक, भए यस्ता नेताकार्यकर्ता चकित पर्ने निर्णय
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको हाईकमाण्ड बैठक केहि समय अगाडी मात्र सकिएको छ । आज सोमबार बसेको बैठकले सांगठनीक एकीकरणको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने गरी विभिन्न केन्द्रीय निकायहरुको अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टीले सांगठनीक एकीकरणको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने आफ्नो कार्यसूची बनाएकोमा केन्द्रीय निकायहरु गठन गर्ने कामले पूर्णता पाएको हो । जसअन्तरगत केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा अमृत बोहरा र सचिवमा अशोक रोकाय, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा विष्णु पुकार श्रेष्ठ र सचिवमा माधव पौडेल, लेखा परीक्षण आयोगको अध्यक्षमा पुष्प कँडेल र सचिवमा टेकनाथ आचार्य, केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीको अध्यक्षमा केशव बडाल र सचिवमा नन्दकुमार थापा चयन भएका छन् ।
यता, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको अध्यक्षमा नन्दकुमार प्रसाईं र सचिवमा गोविन्द ज्ञवाली चयन भएका छन् । यसबाहेक सांगठनीक एकीकरणको बाँकी काम प्रवास संगठनको बारेमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । केन्द्रीय आयोग गठनमा अनुशासन, लेखा परीक्षण र सल्लाहकार आयोग पूर्व एमालेको भागमा परेको छ भने निर्वाचन आयोग र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च पूर्व माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । यसैबीच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले कालापानीको विषय अहिले नै अन्तराष्ट्रियकरण गरे समस्या पैदा हुने बताएका छन्।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले सोमबार यस्तो बताएका हुन्। सीमा विवादको विषयलाई कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने उनले प्रष्ट पारे। समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रचण्डको धारणा रहेको थियो । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भुभाग कालापानीलाई समेत भारतको भन्दै सार्वजनिक गरेपछि अहिले नेपालमा यसको सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । यसैगरी सरकारले विद्यार्थीहरुबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिन निजी मेडिकल कलेजहरुलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । नभए ठगीको मुद्दा चलाउन बाध्य हुने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्ना विद्यार्थीहरुको माग सम्बोधन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुलाई आग्रह गरे । चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषदका निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तिम पटक आग्रह गरिएको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरुले मिलाउनु भएन भने विद्यार्थी र अभिभावकका निवेदनहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ ।’ १५ दिनभित्र विद्यार्थीहरुका गुनासा सम्बोधन नभए ठगी मुद्दा चलाउन आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयलाई सोमबार नै पत्र लेख्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ । तालाचाबी बुझाइदिन्छौं भनेको भरमा निजी मेडिकल कलेजहरु उम्कन नपाउने मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘कानून सबैका लागि लागू हुन्छ ।’
मेडिकल कलेजहरुले अहिले विद्यार्थीहरुको माग सम्बोधन गरेर पठनपाठन सहज रुपमा हुने वातावरण बनाए शुल्क र संरचनाबारे नयाँ ढंगले बहस गर्न शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग सकारात्मक रहेको उनले बताए । उनले अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई पनि गुपचुप रुपमा असमान सर्तहरु स्वीकार नगर्न आग्रहसमेत गरे । ‘पहिले आफू सुरक्षित हुन जस्तोसुकै शर्तहरु स्वीकार गर्ने र अहिले सरकारको निर्णय लागू भएन भन्नु भएन’, उनले भने ।
यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) का नेताहरु हेलिकोप्टर लिएर रसुवाको गोसाइँकुण्ड पुगेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवाली हेलिकोप्टरमा आइतवार गोसाइकुण्ड पुगेका हुन् । गोसाइँकुण्ड पुगेर कुण्डको डिलमा रहेको ढुंगामा बसेको तस्वीर नेता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको तस्वीरमा धेरैले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनको तस्वीरमाथि ११४ जनाले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । जसमा धेरै जसोले हेलिकोप्टरमा गएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । देशमा सार्वभौमिकता र सीमाको विषय उठिरहेको बेलामा नेताहरु मस्तीमा लाग्नु गलत भएको केही प्रतिक्रिया रहेको छ भने केहीले सरकारी खर्चमा त होला नि मस्ती भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै समाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरका अन्य प्रयोग कर्ताले तस्वीरहरु सेयर गर्दै नेताहरुको विलाशी जीवन भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डडेल्धुरामा अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको छ । डडेल्धुरामा एकसाता अघिदेखि अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रिएपछि काठमाडौं ल्याउन लागिएको हो । डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रिँदै गएपछि सरकारले डा केसीलाई काठमाडौं ल्याउन नेपाली सेनाको डेलिकोप्टर डडेल्धुरा पठाएको छ । यस्तै डा केसीको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौंको वीर अस्पताल र टिचिङ अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन समेत निर्देशन दिइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार वीर र टिचिङ अस्पतालले अस्पतालमा चिकित्सक सहितको टोली तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । वीर अस्पतालका निर्देशक डा केदार सेञ्चुरीले वीर अस्पतालमा डा केसीको उपचारका लागि आइसीयू वेड समेत खाली गराइएको बताए ।
‘हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वीर अस्पतालमा ल्याउन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ त्यसैले तयारी अवस्थामा बस्नु भनेर भन्नुभएको छ, अब काठमाडौं नै ल्याउनुपर्ने अवस्था भएपछि आइसीयू मै राख्नुपर्ने होला,’ वीर अस्पतालका निर्देशक डा सेञ्चुरीले खबरहबसँग भने, ‘हाम्रो अस्पतालमा पनि आइसियू वेड त खाली हुँदैन, तर सरकारको निर्देशन अनुसार डा केसीको लागि स्टेबल विरामीलाई यताउता म्यानेज गरेर आइसीयू वेड खाली गर्दै छौं ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले टिचिङ अस्पताललाई पनि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार टिचिङ अस्पतालले पनि डा केसको उपचारका लागि चिकित्सक सहितको टोली तयारी अवस्थामा राखिसकेको छ । कात्तिक १८ गतेदेखि डडेल्धुरा अस्पताल नजिकै एक निजी घरमा अनसन बसेका डा केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि उनलाई सहयोगीहरुले डडेल्धुरा अस्पताल लगेका थिए ।
डडेल्धुरा अस्पतालमै रहेर अनसन बसिरहेका डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रिएको र डडेल्धुरामा डा केसीको उपचार सम्भव नभएको भन्दै अस्पतालले हिजो (आइतबार) मात्रै विज्ञप्तीमार्फत जनाएको थियो । डडेल्धुरा अस्पतालले डा केसीको मुटुको चाल बढेको, रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम भएको, मिर्गौलामा समस्या देखिएको र शारीरिक अवस्था समेत कमजोर हुँदै गएको भन्दै अस्पतालमा डा केसीको उपचार सम्भव नभएको बताएको थियो । डडेल्धुरा अस्पतालले डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएकाले उनको उपचार गर्न नसकिने बताएपनि डा केसी भने आफ्नो माग पुरा नभएसम्म त्यहि रहने अडानमा थिए । डा केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएसँगै डा केसीका समर्थकहरुले डडेल्धुरा र काठमाडौंमा समेत जीवनरक्षाको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रदै गएपछि सरकारले काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेको हो । यता डा केसीले भने आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आफु डडेल्धुरामै बस्ने अडान राखेका छन् ।
यी हुन् डा‍ केसीका मुख्य मागहरु
हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस । विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस । आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस।
संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४-५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट रोकी पीड़ितहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।
दीपक मनाङेको अभिव्यक्तिबारे एमालेले माग्यो सरकारको धारणा, मनाङेले के भनेका थिए त्यस्तो ?
‘नेपालमा भारतको नाकाबन्दी कुरुप छिमेक कूटनीतिको प्रतीक’
उपप्रमुख खड्गीसहित कांग्रेसका १४ जनप्रतिनिधिले गरे काठमाडौँ महानगरको नगरपरिषद् बहिष्कार
सरकारको बिरोध गर्नेविरूद्ध प्रतिवादमा उत्रिन मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
झलनाथ खनालको यस्तो वक्तव्यले एमालेमा भूकम्प
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा फेरि बाढी आउन सक्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा दिए प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको यस्तो कारण